Chiropa chinodzivirira chemakwenzi anobvisa granules (Gan Dan Granules)
Chigadzirwa Shuwa Kuumbwa Isatis midzi, herba artemisiae capillariae Kuonekwa Ichi chigadzirwa brown brown granules; zvinorwadza zvishoma. Chiratidzo (chinangwa) Kubvisa kupisa uye kudzora, kudzivirira chiropa neitsvo, uye cholagogic uye inowira. zviratidzo zvehuku hepatitis, kuzvimba kwemeno uye pericardial fungidziro yekudzivirira uye kurapwa kwechirwere che ankara. nekudzivirira chiropa uye kudzivirira itsvo, iyo inosangana neyemukati matumbu-ecological kugadzirira kuputa ...
Chigadzirwa Shuwa Kuumbwa Isatis midzi, folium isatidis. Kuonekwa Ichi chigadzirwa chakapepuka yero kana yero yebhuruu brown granules; inotapira uye inovava zvishoma. Kuratidza Hutachiona hwezvirwere zvehuku sekudziya, atypical sporadic newcastle chirwere, bursitis, adenogastritis, huku reticuloendothelial tishu hyperplasia, davi, pahuro, chirwere chechirwere chekufema; danga hutachiona hepatitis, dha denda, dumbu muscovy dhadha parvovirus chirwere; fowl pox, etc. Dosage Uye Kuparadzira huku: 1kg ye ...
Zviratidzo: Shl ndiyo yemazuva ano mishonga yemakwenzi yakagadziriswa nekureva zvechinyakare mushonga wekurapa nekudzivirira hutachiona hwakasiyana uye kuzvimba. mabasa makuru anosanganisira: Antiviral Enhance immune immune Anti-endotoxin / anti-inflammatory / antipyretic Sanganisa mishonga inorwisa mabhakitiriya ine shl inogona kuderedza kukura kwekurwisa zvinodhaka Kununura kukosora uye kuderedza phlegm Kuumbwa: Shl ndeye chinese / yechinyakare / mishonga yemakwenzi, yakaunganidzwa yakawanda inoshanda zvinhu, ese ari ex ...